Ubungakanani: Uhlalutyo oluSelfowuni lwaBenzi beZigqibo | Martech Zone
Amplitude sisicelo esilula esiphathwayo kubahlalutyi iqonga labaphuhlisi lokudibanisa. Iqonga libandakanya uhlalutyo lwexesha lokwenyani, iideshibhodi ezinonxibelelwano, ukugcinwa liqela, iifaneli ezisebenza ngokukhawuleza, iimbali zomsebenzisi ngamnye kunye nokuthumela idatha ngaphandle.
Izicwangciso zobungcali, zeshishini kunye nezamashishini zikwabandakanya uhlalutyo lwengeniso, ukwahlulwa kwabasebenzisi, imibuzo enokwenziwa ngokwezifiso, ukubhengezwa kwentengiso kubahlalutyi, ukufikelela ngokuthe ngqo kwiziko ledatha kunye nokudityaniswa kwesiko ngokuxhomekeke kwiphakheji oyibhalisileyo.
Ukudityaniswa kweAmplitude kufuna kuphela umgca omnye wekhowudi kwi-app yakho. Nje ukuba udityaniswe, uya kulandelela yonke imihla, ngeveki, kunye nabasebenzisi abasebenzayo benyanga, iiseshoni, ukugcinwa, iintlobo zeefowuni, iqonga, ilizwe, ulwimi, uhlobo lwenkqubo, indawo, kunye nokunye konke ngaphandle kwebhokisi. Yongeza umgca wekhowudi ukulandelela imicimbi eyongezelelweyo kwiseshoni.
Ukunika ingxelo ngokugcina
tags: ubukhuluingxelo yefaneliuhlalutyo lweselfowuniUhlalutyo losetyenziso lweselfowuniukugcinwa kweapp mobileUhlalutyo lwesicelo esiphathwayoukugcinwa kwesicelo esiphathwayoukugcinwa kwengxelo